စွမ်းအင်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ငါးအခြောက်ခံစက်ကိုတရုတ် DPPG150s-X Tsix မှကယ်တင်ခြင်း | Twesix
လျှပ်စစ်ငါးအခြောက်ခံစက်သည်ရိုးရာငါးခြောက်စက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည်။ ခြောက်သွေ့သောအချိန်၏ insulation ကိုလှောင်ပြောင်သောစက်ကိရိယာများသည်ပူပြင်းသည့်စက်သည်လေပူကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ တစ်နာရီလျှင် 29-35 ကီလိုဂရမ်အခြောက်ခံစက်သည်တစ်နာရီလျှင် 29-35 ကီလိုဂရမ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
Dehumidifier - ဖြည်းဖြည်းခြောက်သွေ့နေစဉ်အတွင်းငါးမှအစိုဓာတ်ကိုဖမ်းယူသောအထူးခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ပါ0င်သည်။ Twsix ငါးခြောက်စက်သည်သင်၏ area ရိယာကိုလျော့နည်းစေပြီးအေးစက်စေရန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုလေအေးနှင့် 10% လျှော့ချနိုင်ပြီးငါးကြီးငယ်ငါးခြောက်အဘို့အကြီးလှ၏။
အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေး: ထုတ်ကုန်ထဲမှာမိတ်ဆက်ပေးသည်။ 1. ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှု - 1. ငါး 2. ငါးအသားတင် 3. Squid 4. Crab55
နိမ့်သောအပူချိန် - သင်၏ငါးခြောက်သွေ့ရန်ယခုနှစ်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ Twsix ငါးခြောက်စက်သည်အပူချိန်နိမ့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ငါးကိုအမြန်ဆုံးခြောက်သွေ့စွာခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။ Twsix ငါးခြောက်စက်သည်သင်၏ငါး၏အရသာနှင့်အာဟာရတန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အပူချိန်ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့မှုသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန် features များ - Twsix အခြောက်ခံစက်သည်တစ်လက်ကျန်သောငါးခြောက်စက်ဖြစ်သည်။
ခြောက်သွေ့သောငါးများကိုယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည် အပူချိန်နိမ့်ကျရန်အပူချိန်နိမ့်ကျသောအပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုသက်ရောက်စေသောမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုရှောင်ရှားနိုင်သည် ငါးခြောက်။ ငါးများသည်အစိုဓာတ်အတွင်း၌တည်ရှိပြီးအရသာရှိသောရေနံနှင့်အဆီပါ0င်သည်။ ဘုံခြောက်သွေ့သူအားဖြင့်ငါးအတွင်း၌ moisure ကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ နှင့်ရေခန်းခြောက်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အရေးပါသည်။ လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့ခြင်းဆိုသည်မှာအပူချိန်မြင့်မားသည်။ ငါး၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်, ထို့ကြောင့်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်သည်မြင့်မားပြီးခြောက်သွေ့သောအချိန်သည်မဖြစ်နိုင်ပါ ပိုရှည်ပါ။ Tsix အပူစုပ်စက်ငါးခြောက်သွေ့ရန်သင့်လျော်သည် ရေချိုငါးနှင့်အဏ္ဏဝါငါးအမျိုးမျိုး။ ငါးခြောက်သွေ့သောအနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ်အပူချိန်တွင်ငါးခြောက်သွေ့သည်။ ခြောက်သွေ့သောငါးများသည်၎င်း၏အာဟာရတန်ဖိုးမဆိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။
3. အပူချိန် 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအားစိုက်ပြီးခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့မှုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန် 10 နာရီကြာခြောက်သွေ့သည်။
4. အပူချိန်နိမ့်သောအပူချိန် 25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိခြောက်သွေ့ရန်6နာရီ 8 နာရီအထိခြောက်သွေ့ရန်5နာရီမှ 8 နာရီအထိဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ငါး၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများတွင်ပါ0င်သောအစိုဓာတ်သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ကျနိုင်သည်။
5. 10-12 နာရီအဘို့အ 50 ဒီဂရီ Celsius အတွက်ခြောက်သွေ့။
6. ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့မှုကိုပြီးဆုံးခြင်း, အပူချိန်အအေးကိုစောင့်ပါ, အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ထုပ်ပိုးရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်
ငါးခြောက်သွေ့သောငါးသည်ပရိုတင်းဖြင့်ကြွယ်ဝသောကြောင့်ခြောက်သွေ့သောငါးများမလွယ်ကူပါ။ Tsix အပူစုပ်စက်ငါးခြောက်သည်ခြောက်သွေ့သောငါးများသို့သဘာဝအေးသောလေကိုတုပနိုင်ပြီးခြောက်သွေ့သောငါးခြောက်၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
အပူစုပ်စက်ခြောက်စက် အေးခဲနေသောငါးခြောက်စက် ငါးခန်းခြောက်စက်